Lesona an-kibo mandihy ho an'ireo vao manomboka
Androany, ireo dihy fanta-daza malaza dia naharesy an'izao tontolo izao, ary saika any amin'ny tanàna rehetra dia afaka mahita lesona avy amin'ny kibo ho an'ny vao manomboka. Tsy mahagaga raha malaza be ankehitriny izany - inona ny tovovavy tsy te-hahatsiaro ho toy ny hatsaran-tarehy miorina any atsinanana ary manao akanjo mahagaga sy mahafinaritra?
Ny tombotsoan'ny dihin-koditra oriental ho an'ny mpandray anjara
Azo antoka fa efa naheno anao mihoatra ny indray mandeha fa tena mahasoa ny dihy an-kibo. Eny, tena marina tokoa izany. Na dia manatrika ny sekolin'ny kibo mandritra ny volana vitsivitsy monja aza ianao, dia mety efa manam-potoana hanamarihana ireo vokatra tsara sy mahafinaritra avy amin'ny kilasy:
dia hampivelatra ny fahatsapana mozika, rhythm ary fihainoana;
Ho lasa mahafinaritra kokoa amin'ny hetsika rehetra ianao;
Ho hitanao fa tsara tarehy, na dia ny fihazonana azy aza;
Hanjary hitazona kokoa ny endrikao, hanangona ny hozatra;
dia hianatra ianao fa maharitra kokoa noho ny nieritreretanao;
Ny fanaovana fanatanjahan-tena tsy tapaka dia manampy amin'ny fihenan-danja (raha misy lanjany be loatra);
Rehefa mandihy amin'ny kibonao ianao dia manofa sigara izay mandray anjara amin'ny fahaterahan'ny ankizy ary mandray anjara amin'ny fanamafisana ny fahasalaman'ny vehivavy;
dia hatoky ianao amin'izay alehanao;
Ho tsapanao amin'ny farany ny hery feno avy amin'ny zana-tsavivavinao!
Ao amin'ny sekolin'ny kibo rehetra ao anaty vondrona ho an'ny mpandray anjara vao manomboka dia tsy mitovy amin'ireo izay efa nanatrika kilasy efa hatry ny ela - ny sokajy faharoa dia maneho hatrany ny fitokisany, ny endriny sy ny fahasambarana.
Dihy ho an'ny mpanjifany
Ho an'ny ankizivavy kely iray, ny dihy an-kibo dia afaka mitondra soa be dia be. Efa hatramin'ny 5-8 taona izao, dia afaka manome safidy ny zanakao amin'ny fampiofanana dihy an-kibo ho an'ny vao manomboka. Mazava ho azy, Ny fanakorontanana sy ny hetsi-panoherana goavana avy amin'ny lalan'ny ankizy dia nesorina, ary ny fahasalamana ho an'ny fahasalamana. Saingy misy tombontsoa maro amin'izy ireo:
Ny ankizy iray mianatra dihy dia matoky tena kokoa noho ny an'ny hafa;
Ny tovovavy dia manatsara ny fahamendrehana, ny fahasoavana ary ny fandrindrana ny hetsika, ny antony mahatonga ny zanakao vavy tsy hanambony na tsy hianjera;
Karazana karazana fialan-tsasatra ho an'ny dihy oriental ny zaza no tena mahafinaritra, ary ny fahafahana mitafy azy, ary na dia manao dihy aza - dia fifaliana lehibe;
Ny dihy oriental dia mampivelatra ny vatana ara-batana sy ara-batana amin'ny fanahy - ny ankizy manatrika ny kilasy dia misimisy kokoa sy tompon'andraikitra.
Na dia efa nianatra nandihy nandritra ny fotoana lavalava aza ianao, dia tsy vonona ny hampiofana ny tenanao ho an'ny ankizy. Ireo mpampianatra za-draharaha dia hanosika, inona ny hetsika ho an'ny ankizy dia tsy voatery ary hitondra ny fibodoana mba tsy hisy ny loza mety hiteraka.
Dihy matevina: boky fianarana manomboka amin'ny fanombohana
Raha toa ianao ka tapa-kevitra ny hianatra mandihy mandihy dia mila manatontosa fandaharam-pitsaboana manokana ianao - raha eo dia hohazavaina amin'ny an-tsipiriany ny sasantsasany rehetra ary hanondro ny fahadisoanao, izay manakana anao tsy hanatanteraka izany na izany hetsika izany. Na dia izany aza dia azo atao ny mianatra any an-trano - noho izany dia ampy fotsiny ny mividy lahatsary fanoratana ho an'ny mpandray anjara.
Zava-dehibe ny misafidy lahatsary mety, izay anazavan'ny mpampianatra amin'ny an-tsipiriany ny hetsika tsirairay ary manondro ny mety amin'ny fahadisoana. Na izany aza, raha tsikaritrareo fa ny zava-drehetra dia mora sy tsotra ho anao, dia mety tsy mila fanazavana maimaika.
Manomboka amin'ny tranonkala lesona natolotr'i antsika ary nosedrain'ny mpamaky ary mety ho tianao tokoa ny hahitanao fotoana hianarana mafy amin'ny studio.
Na dia nanapa-kevitra ny hianatra any an-trano amin'ny lahatsary iray ianao dia mila manamboatra fandaharam-potoana ho an'ny tenanao ianao ary manao farafahakeliny roa, na tsaratsara kokoa - intelo isan-kerinandro. Ireo kilasy mahazatra izay mahasoa ny fanahinao sy ny asanao ary manampy amin'ny fampandrosoana ny fahasoavana sy ny plastika. Noho izany, makà 2-3 ora isan-kerinandro, izay azo antoka fa hanome anao ny fianaranao - ary hahomby ianao!
Fampiofanana amin'ny fanombohana
Ahoana no hianaranao mitsambikina ambony?
Fandaharam-pianarana ho an'ny fanamaivanana
Fanatanjahantena momba ny fandoroana tavin-kena
Fanatanjahantena miaraka amin'ny barbell amin'ny trano
Biby katsaka miaraka amin'ny akoho ao anaty lafaoro
Enuresis amin'ny ankizy - ny antony sy ny fitsaboana amin'ny fomba maoderina sy nentim-paharazana
Nahoana no ilaina ny ranomasina?
Ny kisoa no masira
Ahoana no handresy ny tahotra?
Laparoskopin'ny fibromena uterine
30 sarimihetsika biby tsara tarehy izay hahatonga anao ho tsara kokoa
Wroclaw - toetrandro
Ahoana no fomba hanamboarana ny tananao amin'ny tananao?
Fanorenana fototra fanorenana
Sakadia klasika «Chicken with anana» - resipe
Inona no mafana kokoa: akanjo pataloha na akanjo hoditra, inona no tsara kokoa amin'ny ririnina?
Ny karazana fanaovana sikidy sy ny fanaovana sikidy